.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Effect များ ၂
Flash Effect များ ၂
ဒီနေ့တော့ flashsong ဖန်တီးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် flash effect အသစ်တွေထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်လေးကနေ သွားရောက် ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ..
flash effects များဒေါင်းရန်
link ပေါ် right click >>> save link as နှိပ်ပြီးဒေါင်းယူသွားနိူင်ပါတယ်။
ဒီ Effect ပုံလေးတွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးကြပါရန်...။
Posted by FlashSongCrazy at 04:47